XOG: Ciidamadda Maraykanka iyo Somalia oo qabtay Horjooge Alshabaab ah oo ka yimid Maraykanka. – Hornafrik Media Network
XOG: Ciidamadda Maraykanka iyo Somalia oo qabtay Horjooge Alshabaab ah oo ka yimid Maraykanka.
GAALKACYO: War ay HornAfrik kasoo xigatay Saraakiil Maraykan ah ayaa sheegaya in Ciidamo Mareykan ah oo kaashanaya kuwo Soomaali ah Hawlgal ay sameeyeen ay ku soo qabteen shaqsi lagu tuhmayo inuu deganaasho sharci ah ku leeyahay Mareykanka kana tirsan Alshabaab, sidaa waxaa sheegay saraakiil u hadlayey xooggaga difaaca Mareykanka.
Ciidamada Mareykanka oo fulinayey howlgalo isugu jira caawinaad iyo talo bixin ku aaddan qaababka loo bar-tilmaameedsado Alshabaab, intii ay arimaha ku gudajireen ayaa weerar ku qaaday shaqsigan oo ku sugnaa meel u dhow Gaalkacyo, Soomaaliya. Waxayna Hawlgalkan Saraakiisha Maraykanka ah ku macneeyeen Bartilmaameed la mahdiyay.
Mid ka mid ah saraakiisha mareykanka oo aan magaciisa la shaacin ayaa caddeeyay in ciidamada dowladda Soomaaliya ay gacanta ku dhigeen shaqsigan oo si sharci ah ku degan dalka mareykanka.
Shaqsigan oo aysan warbaahintu carabaabin lab iyo dhedig midka uu yahay, magaciisa iyo da’diisaba ayey saraakiishu ku tilmameen inuu Alshabaab u ahaa ‘’Howl Fududeeye’’ .waxayna intaa raaciyeen inuusan muwaadin Mareykana aheen oo ay soo baarayaan qaabkii uu dalkaas ku deganaa.
Shaqsigan waxa uu hada ku jira xabsi ay leedahay dowladda Soomaaliya.
Weerarada dabagalka ah ee lagu bartilmaameedsanayo shaqsiyaadka kasoo jeeda ama ka yimid asal ahaan dalka Mareykana oo qaarkood looga cabsi qabo inay ku biiraan ururka argagixisada ah ee Alshabaab, si looga hortago shirqoolada argagixasadu wax ku shaqaaleeyaan kuna tababaraan ayaa waxaa gacan ka gaysta Maraykanka.
Howlgalka mid la mid ah ayey ciidamada mareykanku ka fuliyeen deegaanka kuunya Baroow iyagoo kaashanaya ciidamada Soomaaliya horaantii bishan.
Tan iyo sanadkii 2013, Mareykanku waxay ciidamada Soomaaliya ka caawinayeen la dagaalanka argagixisada Alshabaab oo ka tirsanaa Alqaacidaadii burburtay farac yadeeda.